Ndị mmadụ biputere, Ndi mmadu gbasara aka | Martech Zone
HubSpot ewebatala Igbe nchekwa ọha, ngwa ohuru nke jikọtara nlekota oru mgbasa ozi na mbipụta ya na nchekwa data kọntaktị HubSpot, na-enyere ndị ahịa aka ịmepụta echiche nkewa nke ọrụ mmekọrịta nke ndị ndu ha, ndị ahịa, na nnukwu ndị nkwusa ozioma. Ntughari ohuru na-ebelata mkpọtụ metụtara ige ntị na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-eme ka ụlọ ọrụ na-eme ka ndị isi nwee mkpa nzaghachi, ma na-enye ọnọdụ maka mmekọrịta mmekọrịta na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na-eji usoro ndị na-eme mkpọtụ na nke na-egbochi ndị ahịa ịzụ ahịa.
Isi uru nke ngwa ọhụrụ ahụ gụnyere:
Mmekọrịta na HubSpot's Ndi ana-akpo Data: HubSpot ga-akpaghị aka na atụmanya, ndu, ma ọ bụ akaụntụ Twitter nke ndị ahịa dabere na email ma wepụta ndekọ zuru oke nke mmekọrịta ọ bụla ha na ụlọ ọrụ gị ruo ugbu a, yabụ ị nwere ike hazie azịza gị na nkọwa ndị ọzọ na gburugburu. Igbe mbata ga-egosipụtakwa tweet ọ bụla sitere na onye nwere otu aha ahụ dị ka kọntaktị site na nchekwa data gị, yabụ ị nwere ike ịga n'ihu ịmepụta profaịlụ kọntaktị.
Nlekota nke ngalaba na mata: Ihe ịma aka dị ogologo maka ndị na-ere ahịa bụ nnukwu data ha na-enyocha kwa ụbọchị. Inbox Social na-enyere ụlọ ọrụ aka ngwa ngwa na ngwa ngwa bulie mgbasa ozi mgbasa ozi nke ndị mmadụ, iji chọpụta usoro ndụ nke onye nyere n'ime ngwa ngwa Social Inbox, yana ịtọ ntọala maka isi ihe dị mkpa nke akara gị, site na ụdị na nlele asọmpi. nsuso isi zụrụ isi.
Nrụpụta ọrụ na arụmọrụ karịa ahịa: Ọdịdị na ojiji nke Social Inbox na-eme ka ọ dị mfe na enweghị ntụpọ maka ndị ahịa na ndị njikwa ọrụ iji leverage nke ngwa ngwa ahụ. Kpọmkwem, ngwa ngwa mkpanaka na-enye ndị njikwa azụmaahịa ohere ịnweta ọkwa ntanye dabere na ntinye aha ha. Mwekota nke Social Inbox na ngwa email HubSpot na-enyekwa ndị ọrụ aka ịzaghachi ajụjụ ndị ahịa na Twitter na ozi email.
Nchịkọta dị irè: Ndị na-ere ahịa ka na-agbakọ ịgụpụta nloghachi na ntinye ego nke mgbasa ozi mmekọrịta, mana HubSpot's Social Inbox na-enye ndị ahịa ohere ịhụ ọtụtụ nleta, ndu, na ndị ahịa sitere na ọwa mgbasa ozi ọhaneze. Tụkwasị na nke a, ndị ọrụ nwere ike ịhụ ọ bụghị naanị ọnụ ọgụgụ nke clicks ma ọ bụ mmekọrịta nke onye ọ bụla, kamakwa aha nke kọntaktị ọ bụla gosipụtara mmasị na tweet.
Igbe mbata na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụrụ egwuregwu. Ndị otu nkwado nwere ike ịgbaso arịrịọ ọrụ na email; ndị ahịa nwere ike ịgbanwe oku a na-eme na ibe ọ bụla atụmanya ma ọ bụ na-eduga nleta dabere na ebe ọ nọ na usoro ndụ ndị ahịa ha; na ndi otu ahia nwere ike itinye ndu ndi mmadu aka na ndu ndi mmadu. Na mgbakwunye na ịbụ nke onwe, Social Inbox na-enye ọtụtụ ngwaọrụ zuru oke na uru ndị na-agbatị karịa ahịa iji tinye ahịa na ọrụ.
Iji kwalite mwepụta ahụ, Hubspot ekerịtala ihe omuma a na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Tags: okpokorohubspot elekọta mmadụ mediaigbe mgbasa ozi mmekọrịtaSocial Media Marketingusoro mgbasa ozi
Mee 9, 2013 na 4: 50 AM
Ngwá ọrụ magburu onwe ya site na Hubspot, ị kwesịrị ịnwale nke a wee hụ maka onwe gị! Akwa post!